Edito Taratra Archive | NewsMada | Page 36
Par Taratra sur 08/08/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Lasa lavitra ny heritreritr’ity raim-pianakaviana iray, niteny irery, avy eo lasa … « Afaka 50 taona any ho any, angamba, ny Malagasy no hahatongavan’ny mpizahatany eto sy hojereny », hoy izy, toa kivy ny amin’ny hoavin’ity firenena ity sy ny vahoaka ao aminy. Rehefa dinihina lalina tokoa, toa efa manakaiky ny hahamarina izany. Tranga malaza, tato […]
Indraim-bava: fahafahana… nahafahana izao
Par Taratra sur 07/08/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Fitenenana malaza iray izay ny hoe: mijanona eo amin’ny fanombohan’ny fahafahan’ny hafa ny fahafahan’ny tena. Samy manana ny zom-pahafahany… Aiza ho aiza izay fahafahan’ny tsirairay izay amin’izao? Kibo mitsara tena ny isam-batan’olo-miaina. Miaina araka ny tokony ho izy ve? Mangeja ny fahantrana lalina sy maharitra, mampitaintain-dava ny tsy fandriampahalemana, manempotra ny vidim-piainana, tsy iainana finaritra […]
Indraim-bava: fotodrafitrasa… fositra
Par Taratra sur 05/08/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Fotodrafitrasa fototra? Hirahiran’ny mpitondra amin’izao fotoana izao io, tanisaina lava amin’ny hoe mijery lavitra rehefa manao zavatra. Misy milaza fa karazana fialana amin’ny tsy fahombiazana manoloana ny fahasahiranam-bahoaka amin’izao fotoana izao. Na paipaika sy kajikajy hanohizana hatrany ny fitondrana, na efa izao aza ny fahavoazan’ny firenena sy ny fiainam-bahoaka. Anisan’izay fahasahiranam-bahoaka izay, ohatra, ny tsy […]
Indraim-bava: fampandrosoana… fahantrana
Par Taratra sur 04/08/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Mihazakazaka be, hono, ny fampandrosoana amin’izao. Fampandrosoana inona, fampandrosoana an’iza… ? Eo ny vahoaka mitsara sy miaina, raha misitraka inona amin’izany. Sao tsy mifankahazo ny resaka? Mila porofoina fa misy fihatsarana ny fiainam-bahoaka andavanandro. Mety azo anombanana izay hoe fandrosoana sy ny fihatsaram-piainana izay, ohatra, ny fisian’ny fandriampahalemana maharitra sy azo antoka. Izay mandry fahalemana […]
Tsy fandriampahalemana, tsy fitoniana…
Par Taratra sur 03/08/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy filo tsy fihatsaka, tsy kitay tsy vary maina… Izany izao ny ankamaroan’ny vahoaka malagasy noho ny fahantrana lalina sy maharitra? Tsy vitan’izany, raha ny zava-mitranga sy iainana izao: tsy fandriampahalemana tsy fitoniana. Efa tonga amin’ny tsy azo zakaina sy tsy azo leferina, ohatra, ny tsy fandriampahalemana: tsy andro tsy alina; tsy an-tanàn-dehibe tsy ambanivohitra, […]
Indraimbava: Tantely amam-bahona
Par Taratra sur 02/08/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Ny loza tsy mampiomana ! Vahotra tokoa ny tena amin’ireo trangam-piarahamonina ahafatesana ain’olona samihafa. Fahafatesana tampoka tsy nampiomana dieny mialoha avokoa izy ireny na samy manana ny endrika isehoany aza. Fahafatesana tsy mbola voafaritra na famonoana tena na vonoan’olona an-kitsirano, lozam-pifamoivoizana mahatsiravina, asan-jiolahy sy asan-dahalo amin’ny fomba feno habibiana. Tsikaritra koa fa maro ireo tsy mankasitraka […]
Indraim-bava: tsy mahomby na tsy misy manelingelina aza…
Par Taratra sur 01/08/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, tsy fanjarian-tsakafo, tsy fisian’ny asa, ady sy fandrobana tany… Ireo no olana mahazo ny vahoaka ifotony isan’andro vaky. Nefa tsy hita izay tena vahaolana haingana sy maharitra tanterahin’ny mpitondra fanjakana amin’izany. Vao mainka izay hoe fampandrosoana… Lasa izay ny telo taona sy tapany, ny eo ihany ny eo. Eny, na mitady […]
Indraim-bava: manaova raha mahavita, manova rehefa tsy mahita…
Par Taratra sur 31/07/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Manaova raha mahavita… Izay indray tato ho ato no mampitsamboaboatra amin’ny fanamarinan-tena sy fandokafan-tena hoe tena miasa, tsy misy toa azy, sahy manao fanamby… Marina ve izany? Ny tsirairay no mitsara, raha misy izay fanovana amin’ny fiainana andavanandro amin’ny tsy fandriampahalemana, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny ady sy fandrobana tany etsy sy eroa, ny tsy fisian’ny […]
Indraimbava: tsy misy demokrasia…
Par Taratra sur 29/07/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Tena efa ao anaty jadona sy tsy misy demokrasia ny firenena manoloana ny fihetsiky ny mpitondra. Aza manantena ny hisian’ny fanehoan-kevitra malalaka intsony raha tsy any amin’ny fampielezan-kevitra angamba. Hosakanana sy potehina amin’ny fomba rehetra ireo mitady hihetsika, raha miainga amin’izao fanakanana hatramin’ny farany ny antoko Tim izao. Voaporofo izao fa tsy ho afa-bela ireo […]
Indraim-bava: fijery mitanila!
Par Taratra sur 28/07/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Eny, nalahelo tokoa ny mpanakanto sy ny vahoaka malagasy rehefa nodimandry i Régis Gizavo, ilay nampiteny ny angorodao, hoy ireo izay niaraka taminy. Na vahiny na eto an-toerana, samy nanaiky izany talenta izany. Saingy misy indro kely ihany, tao ireo olona maro maty izay nanana ny maha izy azy kanefa tsy nisy ny fisaonam-pirenenana natao […]
Mety afaka milamina kokoa ve?
Par Taratra sur 27/07/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Mendri-piderana ny zava-bitan’ny polisy, raha ny tatitra momba ny ezaka natao ho an’ny fandriampahalemana teto Antananarivo, tao anatin’ny roa volana. Jiolahy dimy no lavo, voarohirohy 417 naiditra am-ponja vonjimaika ary basy sy grenady maro no sarona (vakio lahatsoratra etsy ankilany). Nisy ny fanafihan-jiolahy rava, saingy niaraha-naheno tamin’ny haino aman-jery fa maro koa ireo jiolahy nahatontosa […]
Indraim-bava: manararao-paty aloha…
Par Taratra sur 26/07/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Migadona an-tanindrazana, anio, ny nofo mangatsiakan’i Régis Gizavo. Fisaonam-pirenena, noho izany, ny andro rahampitso, araka ny tapaka tamin’ny filankevitry ny governemanta farany teo. Zava-dehibe izany… Hisaona ny olomangan’ ny kanto, nitondra avo ny kolontsaina malagasy manerana ny vazantany efatra i Madagasikara iray manontolo. Mendrika ny maty, ary adidy farany ho an’ny velona. Mety efa nisy […]
Indraim-bava: teny gasy, teny “faran’ny tsy hay”…
Par Taratra sur 25/07/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Manomboka amin’io taom-pianarana vaovao, 2017-2018, io, ny teny malagasy indray no ho teny enti-mampianatra any amin’ny ambaratonga fototra, T1 hatramin’ny T4, araka ny fanapahan-kevitra vaovao niainga avy ao amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Raha tsorina, hiverina amin’ny fanagasiana indray izany. Fanagasiana, teny nalaza sy nahabe resaka tamin’ny andron’ny revolisiona sosialista, ny taona 1975, fony ny capitaine de […]
Indraimbava: tsy mandeha amin’ny laoniny…
Par Taratra sur 24/07/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Be resaka fotsiny fa tsy misy mandeha amin’ny laoniny ny zava-drehetra eto. Mbola mijanona ho angoan-tenda sy fampanantenana ny fomba fiasa sy ny fampiharana ny fanjakana tan-dalàna sy ny mangarahara eto amintsika. Mampiaka-peo ohatra ny mpitandro filaminana fa handraisana fepetra ary hampihatra lalàna momba ireny fanamiana mitovy amin’ny an’ny mpitandro filaminana ireny. Tahaka izany koa amin’ireo […]
Indraim-bava: soatoavina… sinoa toavina…
Par Taratra sur 22/07/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Mipetraka ho tantara ny fametraham-pialan’ny minisitry ny Fitantanam-bola sy ny tetibola teo aloha, na nezahina nampanginina haingana aza: fanendrena avy hatrany izay ho solony, famindram-pahefana haingana be… Fahamehana hamono afo sa fanarenana ny lesoka tsy takona afenina? Misy antony ao, matoa nametra-pialana. Fanaovana ny mangarahara, fanarahan-dalàna amin’ny asa, fandalana ny fahamarinana, fifanajana sy fikatsahana mandrakariva […]
Par Taratra sur 21/07/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Nanjakazakan-dRavola mihitsy ireo karazana fampahalalam-baovao (gazety, onjam-peo, fahitalavitra, « internet ») hatramin’ny fiandohan’ity herinandro ity. Niteraka resabe ny momba azy sy ny fitantanana azy. Izy mantsy no fototry ny olana eto amin’ity firenena ity, na ho an’ny mikirakira azy araka izay filàny, na ho an’ireo zara raha mahita ny salovan-tavany ao anatin’ny iray andro. Nahazo namana vaovao […]
Mihalo anaty am-pitoerana hatrany ny fitondrana
Par Taratra sur 19/07/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Fanakorontanana, fanonganam-panjakana… Izay hatrany no iampangan’ny mpitondra izay mitady hanao hetsika etsy sy eroa. Na fitakiana io, na fitokonana, na fidinana an-dalambe… Mahatsiaro tena ho malemy sy tsy mety ho marin-toerana ny mpitondra? Hany ka matahotra sy mahina mandrakariva amin’izay mihetsika rehetra. Vokatry ny ataony ihany anefa no mahatonga ny fahalemena sy tsy fahamarinan-toerana, raha […]
Par Taratra sur 18/07/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Hatramin’izao, tsy misy politika mazava ny momba ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana eto amintsika. Ireo tompon’andraikitra ambony misahana izany, tsy mbola nandroso sori-dalana mazava amin’ity raharaha ity. Vonjy tavan’andro ny ady atao amin’ny asan-dahalo, ny jiolahy rehefa misy ny tranga mafimafy miseho. Mionona fotsiny amin’ny filazana fa tsy ampy ny fitaovana, na ny isa, na […]
Par Taratra sur 17/07/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Takin’ny Sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM) amin’ny hetsik’izy ireo tato ho ato ny fampanjakana ny tany tan-dalàna, ny fahaleovantenan’ny fitsarana na ny tsy fitsabahan’ny mpanatanteraka ny asam-pitsarana, ny tsy fanaovana ho fitaovana politika ny fitsarana, ny fanatanterahana didim-pitsarana… Efa nisy ny fitokonana fanairana tamin’izany, ny fampiatoana asa noho ny fanafintohinana, ny fanomezana fe-potoana hafoloana handinihana […]
Par Taratra sur 15/07/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Anisan’ny vitsy mpanao sady sarotra amin’ny maha olombelona ny fandinihan-tena. Raha mba misy manao izay fandinihana-tena lalina sy maharitra izay aza, saika mibahan-toerana sy mandeha ho azy ny fiheveran-tena ho zavatra, tsy misy toa azy… Tsy afa-miala amin’izany izao fitondrana izao? Mampikaikaika ny maro amin’izay lazainy sy ataony, mampahory… Efa samy nampiaka-peo tamin’ny teny tsy […]
Tsy mahazaka fanehoan-kevitra ny mpitondra
Par Taratra sur 14/07/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Nisy ny toromarika ny mpitondra indrindra amin’ny fitandroana filaminana, amin’ny fampandraisana fepetra hentitra amin’ireo mpanome baiko sy mpitarika korontana eto amin’ny firenena, farany teo. Azon’ny vahoaka ve izany? Ho an’ny olom-pirenena tsotra, ny lehiben’ny dahalo sy ny lehiben’ny jiolahy manafika, ohatra, no hoe mpanome baiko sy mpitarika korontana eto amin’ny firenena, indrindra eo amin’ny fiarahamonina […]
Par Taratra sur 13/07/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Nivaly omaly ny BEPC teto Antananarivo Renivohitra. 48,04%-n’ireo nanala izany fanadinam-panjakana izany no afaka. Mitotongana ny voka-panadinana ! Tarehimarika ahafahana milaza fa mitotongana koa ny tontolon’ny fampianarana. Ny rafi-pampianarana iray manontolo mihitsy no ahitana izay tsy fietezan-javatra izay. Anisan’ireny ireo namolavola ny fandaharam-pampianarana, ny mpampianatra, ny tompon’andraikitry ny sekoly, sns. Iangonan’ny rihitra bebe kokoa ny mpampianatra. […]
Lalàna ambany, olona ambony
Par Taratra sur 12/07/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Hafa raha samy hafa amin’ireo firenena maneran-tany i Madagasikara. Kanto, eo amin’ny zavaboahary eo aminy. Anisan’ny mampiavaka ary tsy misy afa-tsy eto amin’ny firenena Malagasy ny Madagasikara. Be mpitsiriritra ihany koa ny hatsaran’ny morontsiraka, hany ka mahatamana ireo vahiny mpizahantany. Mbola iavahan’ity Nosy mena ity amin’ny hafa ihany koa ny fitsipi-pifehezana ao aminy. Ny lalàna […]
Par Taratra sur 11/07/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Hivoaka ny 17 jolay ho avy izao izany ny vola taratasy vaovao. Raha ny 500 Ar, 2 000 Ar sy ny hafa aloha, heverina fa ilaina satria iaraha-mahita isan’ndro fa mora simba sy rotika ireo karazany ampiasaina ankehitriny. Ny 10 000 Ar indray, mifono hevitra politika fa natao hamafana fotsiny ny tantaran’ny antoko Tiako i Madagasikara […]
Hambom-po diso toerana, toerana mandiso hambom-po…
Par Taratra sur 10/07/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Resabe hatrany ny amin’ny fahalalahana maneho hevitra, manao hetsika ankalamanjana na an-dalambe… Raha ny marina, tsy misy avelan’ny mpitondra fanjakana hanao izany, afa-tsy izy ihany, ny antokony, ny mpomba azy. Efa niseho izany talohan’ny fankalazana ny 26 jona, ary mihamahery vaika sy hasarotiny. Tsy misy ary tsy ahoana intsony izay fisaraham-pahefana sy andraikitra, fa izay […]
« Précédent 1 … 34 35 36 37 38 … 54 Suivant »